Liibiya: Ra'iisul wasaaraha oo iscasilayo - BBC Somali
Image caption Ra'iisul wasaaraha iscasilay ee Liibiya, Cabdalla al-Thini
Ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan loo magacaabay waddanka Liibiya, Cabdallah al-Thinni, ayaa sheegay in uu xilka iska casilayo kaddib markii ay koox maleeshiyo ah ay weerar ku qaadeen qoyskiisa.
Bayaan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha ayuu ku sheegay in weerarka aysan cidna ku dhaawacmin, balse ay sigteen.
Mr al-Thinni ayaa todobaadkii tagay la xaqiijiyay in uu noqonayo ra'iisul wasaaraha cusub kaddib markii xilka laga qaaday, Cali Zaydaan, oo lagu eedeeyay in uu wax ka qaban waayay ammaanka.
Macluumaadka ku aadan weerarka ayaa kooban mana cadda cidda ka dambeysay, hasayeeshee waxa ay u muuqataa in uu weerarka ka dhacay wadada aado gagida dayuuradaha ee caasimada Tripoli.
Warqad lagu daabacay bar internet ah oo ay dowladda Liibiya leedahay, ayuu Mr al-Thinni ku sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay dhibaato ka soo gaartay weerar fuleynimo ah, taasoo uu sheegay in uusan aqbali karin in dhibaato loogu geysto qoyskiisa xilka loo magacaabay awadiis.
Afhayeenka ra'iisul wasaaraha Liibiya, Axmedal-amiin, ayaa BBC-da u sheegay in Mr al-Thinni iyo golahiisa wasiirada ay sii shaqeyn doonaan ilaa iyo inta ra'iisul wasaare cusub uu ka magacaabayo baarlamaanka Liibiya.
Mr al-Thinni, ayaa waxaa loo magacaabay horraantii bishan in uu noqdo ra'iisul wasaare ku meel ah iyadoo awooddiisa la ballaariyay todobaadkii la soo dhaafay, iyadoo shardi looga dhigay in uu sameeyo dowlad cusb oo xasilooni ku soo dabaasho waddanka Liibiya.
Xukuumada Liibiya ayaa hakad ku jirtay tan iyo markii shaqada laga eryay bishii la soo dhaafay ra'iisul wasaarihii hore Cali Zaydaan.
Mr Zaydaan, ayaa waxaa xilka ka qaaday baarlamanka kaddib markii markab qaada shidaalka oo ku socdaalayay calanka Waqooyiga Kuuriya uu shidaal ka qaaday dekad ay mucaaradka gacanta ku hayaan, dekaddaas oo ay cunaqabateyn saarneyd.
Markabkaasi xamuulka ah ayaa waxaa markii dambe soo qabtay ciidammada badda ee Mareykanka kuwaas oo u gacan galiyay mas'uuliyiinta Liibiya.
Liibiya ayaa waxaa hareeyay daganaansho la'aan tan iyo markii ay kooxo hubaysan ay xukunka ka tuureen Mucamar al-Qadaafi 2011-kii.
Libya oo lagu wareejiyay Saacadi Qadaafi
Diyaarad Libya oo ku burburtay Tunisia
Liibiya oo burburisay hubkeeda kiimikada